ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ (ဂျာမနီ) အသင်း: December 2011
ဆုံနေကြတနင်္ဂနွေ (၂၅.၁၂.၂၀၁၁) ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ
24. 12. 2011 စောဂျူလီယာမောင် ၏ (၂) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မင်္ဂလာ အမှတ်တရ
စောဂျူလီယာမောင်၏ (၂) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မင်္ဂလာပွဲကို ဦးလှမောင်သန်း + ဒေါ်စောစန္ဒာလင်း တို့၏ အိမ်မှာပဲ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်များအား ဆွမ်းခဲဖွယ်ဘောဇဉ်စသည်တို့ကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဧည့်ပရိသတ်များအားလည်း ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်း၊ သီလဆောက် တည်ကျင့်သုံးကြခြင်း၊ တရားဓမ္မများနာယူ၍ ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေခြင်းများကိုလည်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
စောဂျုလီယာမောင် ၏ (၂)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မင်္ဂလာ
ဖေဖေ ဦးလှမောင်သန်း + မေမေ ဒေါ်စောစန္ဒာလင်း တို့၏ ချစ်သည်းဦးလေးဖြစ်သော သမီးလေး စောဂျုလီယာမောင် ရဲ့ ၂၄. ၁၂. ၂၀၁၁ - စနေနေ့မှာ ကျရောက်သော (၂)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မင်္ဂလာပွဲအား အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ ဦးဦး၊ ဒေါ်ဒေါ်၊ ကိုကို၊ မမ၊ မောင်လေး၊ ညီမလေးတို့ အာလုံးကြွရောက်ကြပါရန် ချစ်ခင်မှူများစွာနှင့် ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။
အချိန်နှင့် နေ့ရက် +++ နံနက် ၉နာရီ မှ ညနေအထိ။ စနေနေ့ (၂၄.၁၂.၂၀၁၁)
ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းတိုက်တွင် အသင်းမိသားစုများသည် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း စုပေါင်း၍ ဆွမ်းခဲဖွယ် ဘောဇဉ်များကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ တရားဓမ္မများနာကြားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ကြပြီး သတိပဌာန် ၀ိပဿနာ အလုပ်ပေးတရားများကို နာယူကြကာ တရားအားထုတ်ခြင်း၊ တရားမှတ်ခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
(၁. ၁. ၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် မင်္ဂလာကို ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းတိုက်တွင် ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အသင်းတိုက်သို့ ကြွရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြား အပ်ပါသည်။
ကြွရောက်လာကြသည့် ဧည့်ပရိသတ်များအား ဦးစိုးဝင်းသန်း + ဒေါ်တင်တင်ဝင်း မိသားစုတို့ မှ အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ လှူဒါန်းပါမည်။
နေ့လည် ၂း၀၀ နာရီတွင် တရားတော် နာယူကြပါမည်။
ညနေ ၃း၀၀ နာရီတွင် ကြွရောက်လာကြသည့် ပရိသတ်များ စုပေါင်း၍ ပဌာန်း ပစ္စယနိဒ္ဒေသ နှင့် ၀တ်ရွတ် စဉ်များကို ရွတ်ပွားသရဇ္ဈာယ်ပြီး မေတ္တာပို့သကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းကြီး၏ (ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာ) ၂၀၁၁ - ခုနှစ်၊ ငွေစာရင်း ရှင်းတမ်း
Hla Maung Than
Mg Sein Win
06.07. 11
Min Sein Lin
Toe Min Myat Soe
Toe Aung Tun
Tin Moe Set
Hla Mg Than
Khin Mg Aye + Kyaw Lin
၀ါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲမှ ရရှိငွေ
Khin Than New
V R Net world
Anwalt (ရှေ့နေ) သုံးလစာ (ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်)
· Ps. ယခုရှင်းလင်းပြထားသော ငွေစာရင်းသည် G L S Bank ထဲမှ ငွေစာရင်းများ ဖြစ်ပါသည်။
· 04. 10. 11 ရက်နေ့ ဆရာတော် မြန်မာပြည် ပြန်စရိတ်အား ပြင်သစ် ခရီးစဉ်မှ ရရှိငွေ
· ယင်းငွေ 720 € သည် Bank ထဲသို့ မသွင်းရသေးပါ။
·9လပိုင်းမှ စ၍ Mainova ဖိုးငွေသည် 35 € မှ 43 € သို့ တိုးပေးရသဖြင့် 8 € ပိုပေးရ ပါသည်။
· မရှင်းလင်းသောာ အချက်အလက်များရှိပါက ဘဏ္ဍာထိန်းမှူး ဦးလှမောင်သန်း ထံနှင့် အမှုဆောင်များ ထံတွင် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းကြီးမှ အပတ်စဉ် (တနင်္ဂနွေနေ့) တိုင်းပြုလုပ်သော ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ပြုလုပ်ပွဲတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မည်သူမဆို လာရောက်ကုသိုလ် ယူနိုင်ကြောင်း နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်ကိုးပြီး ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်၊
အပါယ်မကြောက် ခုနှစ်ယောက် တရားတော်ချီးမြှင့်(၄.၁၂.၂၀၁၁)
ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းကြီးမှ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ပြုလုပ်နေကြ ဆရာတော်အား ဆွမ်းခဲဖွယ်များ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး၊ ဆရာတော်ထံတွင် ငါးပါးသီလစောင့်တည်ကြပြီး ဆရာတော် ဦးပညာဝံသမှ အပါယ်မကြောက် ခုနှစ်ယောက် တရားတော်အား ချီးမြှင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
ဆုံနေကြတနင်္ဂနွေ (၄.၁၂.၂၀၁၁) ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ